शेफ सलाद - व्यंजनहरु
म भन्दा राम्रो Wonton सूप
भात र भुईको मासुले भरिएको टमाटर
शेफ सलाद केहि आधारभूत अवयवहरूको साथ बनेको हुन्छ तर मेनूहरूमा फरक देखिन्छ जहाँ तपाईं जानुहुन्छ! कुरकुरा सलादको साथ बनेको, अण्डाहरू, ह्याम र चीज सहित हार्दिक टोपिंग्स यस नुस्खा एक घर बनाउने संग उत्तम छ छाछ पाना पसिना वा हजार द्वीप ड्रेसिंग !
ट्याang्ग र भेनिला पुडिंगको साथ फल सलाद
यसले एक राम्रो खाजा वा राम्रो स्फूर्तिदायी भोजनको लागि तातो रातमा बनाउँदछ (र हामी जहिले पनि छेउमा थप्दछौं घरेलु लसुन रोटी )।
कुरकुरा, र colorful्गीन, र भरिने, एक राम्रो शेफ सलाद नुस्खा carbs कम छ जबकि अझै स्वाद ग्यारेन्टी! जब तपाईं एक ठूलो ताजा कुरकुरा मा नाच गर्दै हुनुहुन्छ को अभाव महसुस गर्न आवश्यक छैन सलाद नुस्खा । चाहे तपाइँ अर्डर गर्नुहोस् वा यसलाई आफैं बनाउनुहोस्, यो विधिले शेफको सलाद वास्तवमा के हो र यसमा के जान्छ भनेर अनुमान लगाउँदछ।
शेफ सलाद भनेको के हो?
एक महान अमेरिकी सलाद मध्ये एक को रूप मा, यो सलाद सामग्री मूल रूपले उही नै हो, सलादको ओछ्यान, केही प्रकारको चिसो मासु (ह्याम, टर्की, कुखुरा, टुना, वा भुनीको मासु), कडा उमालेको अण्डा , काकडी, चीज, र टमाटर। तपाइँ कसरी तयार गर्न र प्रस्तुत गर्न चाहानुहुन्छ यो तपाइँमा निर्भर छ! अमेरिका जस्तै, संसाधन बन्नुहोस् र तपाईंसँग जे छ प्रयोग गर्नुहोस्! सबै तपाईंले याद गर्न आवश्यक छ, एक साँचो शेफ सलादको को रूपमा लेटस, अण्डाहरू, मासु र चीज छ!
कसरी एक शेफ सलाद बनाउन
यो सजिलो भाग हो! केटो शेफ सलादको लागि, अण्डाको सेतो प्रयोग गर्नुहोस् र अन्य विधिका लागि योकहरू बचत गर्नुहोस्।
पालक क्रीम चीज पोर्क टेंडरलिन भरिएको
सलाद : सफा गर्नुहोस् र त्यसपछि आइसबर्ग वा रोमाइन लेटस फाल्नुहोस्। चक्कुले सलाद काट्नु पातको कोषको भित्ताहरू छिटो हुन्छ। यसबाहेक, किन अर्को चक्कु धुनुहोस् जब तपाईं भर्खरै लेटेसलाई अचम्मित काट्न सक्नुहुन्छ - आकारको टुक्राहरूमा? सलाद प्लेटमा राख्नुहोस् वा अलग (प्राथमिकतामा चिसो) सलाद प्लेटहरूमा विभाजन गर्नुहोस्।
शीर्षहरू: पासेदार हेम (वा तपाइँको मनपर्ने मासु) को साथ शीर्ष, पासेदार हरियो प्याज, काटिएको (वा काटिएको) कडा उमालेको अण्डा, टमाटर र काटिएको काकडीको एक कप।
चीज: चेडर वा स्विस चीज थप गर्नुहोस्। तपाईं नीलो पनीर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ वा ईमानदारीपूर्वक, तपाईंले हातमा जे भए पनि काम गर्नुहुनेछ।
ड्रेसिंग: हजारौं टापु वा राँच ड्रेसिंगको साथ सेवा गर्नुहोस्। निलो पनीर ड्रेसिंग यो पनि एक राम्रो विकल्प हो, तर सामान्यतया, एक शेफ सलाद एक vinaigrette संग बनाइएको छैन।
शेफ सलाद संग के सेवा गर्ने
एक शेफ सलाद एक पूर्ण पक्ष को रूपमा र आफैमा एक पूर्ण प्रविष्टि छ घरेलु croutons वा मासुको साथ रोटीको टुक्रिएको टुक्रा साँच्चै स्वाद र बनावट बाहिर गोल। छेउमा सेवा गरिएको मिश्रित जैतुन वा मरीन तरकारीको राम्रो गुणले अझ र colorful्गीन लुकको लागि बनाउँदछ! तपाईं यसलाई सँधै कुनै पनी ओभनको साथ शीर्ष बनाउन सक्नुहुन्छ ओभन पकाइएको चिकन स्तन वा ग्रील्ड चिकन स्तन थोरै अतिरिक्त प्रोटीन थप्न!
केहि घरेलु आइस्ड चिया बनाउनुहोस् स्ट्रबेरी नींबू पानी वा पप उज्जवल Pinot Grigio को एक बोतल खोल्न! त्यसोभए पछाडि बसेर रमाइलो गर्नुहोस्!
गर्मी सलाद को प्रयास गर्नु पर्छ!
सर्वश्रेष्ठ टोस गरिएको सलाद - यस सजिलो पक्ष मा तपाइँको मनपर्ने ग्रीष्म भेजीहरु जोड्नुहोस्।
ताजा गर्मी फल सलाद - 8 ताजा फलहरु संग बनेको।
लोड गरिएको फूलगोभी सलाद विधि - खस्ता, क्रन्ची र स्वादले भरिएको।
ब्रोकली फूलगोभी सलाद - १,२,3 को सजिलो!
सजिलो इटालियन सलाद - कुनै पनि खाना संग उत्तम।
तयारी समयबीस मिनेट कुल समयबीस मिनेट सर्भिंगहरू। सर्विंग्स लेखकहोली निल्सन यो शेफ सलाद एक क्लासिक सबै अमेरिकी पकवान हो लेटस, मासु, अण्डा र चीजको रूपमा जग। प्रिन्ट गर्नुहोस् पिन
▢। कप सलाद हिमशिला वा रोमान
▢। औन्स ह्याम पासा
▢। औन्स चेडर चीज वा स्विस, पासेदार
▢3 हरियो प्याज काटियो
▢। उमालेको अण्डा
▢दुई टमाटर काटिएको वा जोडिएको
▢१ कप काकडी
सलाद धुनुहोस् र सुकाउनुहोस्। काटेको आकारका टुक्राहरूमा फाड्नुहोस् र ठूलो भाँडामा राख्नुहोस् (वा individual भन्दा बढी व्यक्तिगत प्लेटिंग प्लेटहरू विभाजन गर्नुहोस्)।
बाँकी सामग्रीसँग शीर्ष।
हजारौं टापु वा राँच ड्रेसिंगको साथ सेवा गर्नुहोस्।
क्यालोरिज:२0०,कार्बोहाइड्रेट:9g,प्रोटिन:एक्काइसg,मोटो:१g,पागलिएको बोसो:।g,कोलेस्ट्रॉल:२1१मिलीग्राम,सोडियम:7२7मिलीग्राम,पोटासियम:10१०मिलीग्राम,फाइबर:3g,चिनी:6g,भिटामिन ए:१95।IU,भिटामिन सी:१.2.२मिलीग्राम,क्यालसियम:२33मिलीग्राम,फलाम:१.9मिलीग्राम
कीवर्डशेफ सलाद कोर्ससलाद पकाइयोअमेरिकी© SpendWithPennies.com। सामग्री र फोटोग्राफहरू प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित छन्। यस नुस्खाको साझेदारीलाई दुवै प्रोत्साहन र सराहना गरिन्छ। कुनै पनि सोशल मिडियामा पूर्ण रेसिपीहरू प्रतिलिपि गर्न र / वा टाँस्न कडा निषेधित छ। कृपया यहाँ मेरो फोटो प्रयोग नीति हेर्नुहोस् ।
यो ताजा रेसिपी पुन: ठीक गर्नुहोस्